အလုပ်သင်ဆရာဝန်မလေးစုစု – CHAR TAKE
( စိတ်ကူးယဉ် အပြာဇတ်လမ်းသာ ဖြစ်ပါသည် )
စုစု ကခုမှကျောင်းပြီးကာစ အလုပ်သင်ဆရာဝန်မလေး.. အမေဖြစ်သူ မုဆိုးမ ဒေါ်ခင်နုနှင့်အတူ ညီမငယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်သူ မူမူနဲ့ သူသူတို့ မိန်းမသား လေးယောက်သာရှိသည်… ဒေါ်ခင်နုက မုဆိုးမဆိုပေမယ့် လင်ယောင်္ကျားမဆုံးခင် ကချန်ခဲ့သော စည်းစိမ် များကို အရင်းနှီးပြုပြီး ရတနာပွဲစားလုပ်ကာ ရွှေဆိုင်ဖွင့်ထားသဖြင့် နောက်အိမ်ထောင်မပြုဘဲ သမီးသုံးယောက်စလုံးကိုသင့်တောင့်သင့်တယ်ထားနိုင်သည်… ဒေါ်ခင်နုကအရွယ်တင်သလို လှလည်းလှသည်.. အားကစားလိုက်စားတော့ ကိုယ်လုံးကအလတ်ကြီးကျန်သေးသည် … ပွဲစားလောကထဲတွက် မေသန်းနုဟု နာမည်ကြီးသည်.. ဒေါ်ခင်နုကတော့ စီးပွားရေးနဲ့ သမီးသုံးယောက်ရှေ့ရေးကိုသာ အာရုံစိုက်သူဖြစ်သည်.. ခုလည်း သမီးကြီးစုစု ကျောင်းပြီးလို့ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်သင် အနေနဲ့စဆင်းရသည်… စုစုတို့ ညီအစ်မသုံးယောက်စလုံးကလည်း အမေအတိုင်းပဲ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး လုံးကြီးပေါက်လှလေးတွေဖြစ်သည်..
စုစုကတော့ သမီးအကြီးပီပီ မျက်နာတည်သည်.. ဆရာဝန်လောင်းဆိုတဲ့ပညာမာနရှိသည် .. ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကတော့ အိချောပိုလိုမျိုး.. မျက်နှာကျကတော့ မင်းသမီးပန်းဖြူလိုမျိုး နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်သည်… စုစု အလုပ်စဝင်ပြီး သုံးလလောက်နေတော့ တစ်မိသားစုလုံး မြို့ထဲကတိုက်ခန်းကိုရောင်းပြီး ဖော့ကန်ဘက်တွက် လုံးချင်းအိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်ကာ ပြောင်းနေကြသည်.. မြို့ထဲနှင့်အနည်းငယ်အလှမ်းဝေးပေမယ့် ဒေါ်နုကအေးဆေးနေ ချင်သောကြောင့် ပြောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်… ဒီနေ့စုစု ညဂျူတီကျသည်.. နေလည်းသိပ်မကောင်းချင်တော့.. ခွင့်ယူပြီး အိမ်စောစောပြန်ဖို့ လုပ်သည်.. အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ဖို့ လုပ်တော့ဖုန်းတိုင်ကပျောက်နေသည်… ပြန်နေကျပဲလေ ကိစ္စမရှိဘူးဟုတွေးပြီး ဒညင်းကုန်းထိပြန်မည့် ဆေးရုံကကားနှင့် လှမ်းကြုံစီးပြန်လိုက်သည်… စုစုတို့လမ်းထိပ်ရောက်တော့ ကားရပ်ကာ စုစုဆင်းသည်…
အချိန်က ည ၉နာရီခန့်… ခုထိဖုန်းလိုင်းကမမိသေး.. မီးကပျက်နေသည်… မိုးဖွဲများကျနေပြီး လေအနည်းငယ်ပါသည်.. လမ်းထိပ်က နေ အိမ်ထိဆို အနည်းဆုံး ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် လျှောက်ရမည် .. စုစု စိတ်ညစ်သွားပေမယ့် ဖုန်းမီးလေးဖွင့်ကာ မှောင်မဲနေတဲ့လမ်းကြားထဲ တစ်ယောက် တည်းပြန်လာသည်. .အနည်းငယ်ကြောက်ပေမယ့်လည်း ပုံမှန်ပြန်နေ ကျဖြစ်သောကြောင့် စိတ်အေးအေးထားကာ ပြန်သည်.. လျှပ်စီးလက်သံနှင့်အတူ လေးပြင်းပြင်းလေးတိုးဝေ့လိုက်တိုင်း စုစု ထဘီပေါင်ပေါ်ထိ လှန်သောကြောင့် ထဘီကိုလည်း မနည်းထိန်းကိုင် ကာလျှောက်ရသည်.. မိမိနောက်တွင်အန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ခု ပါလာသည်ကိုတော့ စုစု ကြိုသတိမထားမိခဲ့… ခြေသံသဲ့သဲ့လေးကြားမှ အနောက်လှည့်ကြည့်မယ်လုပ်တုန်း .. “အွန့်…” စုစုပါးစပ်ကို ပိတ်ကာလည်မြိုကိအချွန်တစ်ခုနှင့်ထောက်ထားသည်.. “မင်းနည်းနည်းလေးလှုပ်တာနဲ့ မင်းသေပြီသာမှတ် .. ငါ့နောက်ငြိမ်ငြိမ်လေးလိုက်ခဲ့…”ဟုဆိုကာ..စုစုလည်း သေမှာကြောက်တော့ အသာတကြည်လိုက်သွားရသည်…
ရပ်ကွက်နှင့် အလှမ်းဝေးသော အိမ်အိုတစ်လုံးထဲ.. အင်ဗာတာ မီးသီးမှိန်မှိန်လေး ထွန်းထားသည်.. သင်ဖျူးဖြာ အနွမ်းပေါ်မှ စုစုက လက်နောက်ပြန်ကြိုးတုပ်ခံထားရပြီး ဘေးစောင်းလှဲနေသည်… ခြေသံကြားရာဆီလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မင်းဒင်… မင်းဒင်ကား တခြားသူမဟုတ် ရပ်ကွက်ထဲနာမည်ပျက် မှုဒိမ်းကောင် ထောင်ထွက်ကားသမားပင်.. ပြီးခဲ့တဲ့တလော စုစုတို့အိမ်နား မင်းဒင်ဖြတ်လျှောက်နေတုန်းဘေးအိမ်က အဒေါ်ကြီးပြောပြလို့ မင်းဒင်မျက်နှာကို ကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်… မုဒိမ်းကောင်ဆိုပေမယ့် မင်းဒင်က ရုပ်သန့်သည်.. အသားညိုညို ဘော်ဒီတောင့်ပြီးရင်အုပ်ကျယ်သည်.. ပါးသိုင်းမွေးရေးရေးလေနဲ့ ယောင်္ကျားပီသသည်.. ပုံမှန်စော်ကြွေလောက်တဲ့ ရုပ်ရည်ဆိုပေမယ့် ဝါသနာကြောင့်သာ မုဒိမ်းကောင်ဖြစ်နေခြင်းပင်.. အလိုတူတူ မတူတူ မင်းဒင်လိုးခဲ့သည့် မိန်းမများမှာ ဘဝပျက်ခဲ့ရတာကြီးပင်.. ဒါကိုလည်း မင်းဒင်ကဂုဏ်ယူနေခြင်းပင်..
မင်းဒင်ကိုမြင်တော့ စုစုအခြေနေကို သဘောပေါက်သည်.. ဘဝပျက်တော့မည်.. တစ်သက်လုံးရည်းစားမထားဘဲ မိသားစုအရေးနှင့် ပညာရေးကိုသာ ဥိးစားပေးခဲ့သမျှခုတော့ မုဒိမ်းကောင်ကြောင့် ဘဝပျက်ရတော့မည်… ” ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်.. ပြန်လွတ်ပေးပါနော်.. ရှင်လိုချင်တာ ပေးပါ့မယ်.. ဟင့်” ငိုသံနှင့်အသနားခံလေပြီ… မိုးကသည်းသထက်ပိုသည်းလာပြီး မိုးခြိမ်းသံတွေက စကားသံကိုပါမကြား.. မင်းဒင်ကဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်မောလိုက်ပြီး.. “ဟားဟား.. အေး.. ငါလိုချင်တာကလည်း မင်းပေါင်ကြားထဲက စောက်ပတ်ဖောင်းဖေားင်းလေးကိုကွ…ဟားဟား…” ရိုင်းစိုင်းရင့်သီးလွန်းတဲ့ စကားကြောင့် စုစုလည်း ပူထူသွားပြီး ” ရှင် လူယုတ်မာ.. ကယ်ကြပါဦးရှင်….. ” သံကုန်ခြစ်အော်သော်လည်း မိုးသံကိုတော့ မလွမ်းမိုးနိုင်…” ဟား ဟား အော်စမ်းပါ ဆရာမလေးရဲ့…ဘယ်လောက်အော်အော်ထူးမှာမဟုတ်… စိတ်ချပါ မင်းကိုတစ်ခါပဲလိုးပြီး ပြန်လွတ်ပေးမှာပါ… ” ပြောရင်း ရမ္မက် အပြည့်နှင့် စုစုနားတိုးလာပြီး ထဘီစကပ်အကွဲအတိုင်း ပေါင်သားဖွေးဖွေးကို ဖိပွတ်လိုက်သည် …
စုစုရုန်းသည်.. မင်းဒင်ကို ခြေတောက်ဖြင့်ကန်တော့ မင်းဒင်က ခြေတစ်ဖက်ကိုဖိထိုင်ပြီး တစ်ဖက်ကို ဘယ်ဘက်ချိုင်းအောက်ထည့်ကာချုပ်လိုက်တော့ ပေါင်ကားပြီးသားဖြစ်သွားသည်.. ထဘီအကွဲဝတ်ထားတော့ ပေါင်ဖြူဖြူကြားက ပင်တီ အနီလေးပါပေါ်လာသည် … မင်းဒင်က အကြမ်းကြိုက်သူမို့ ပင်တီပေါ်ကနေ စောက်ပတ်ကို ဖိညစ်သည် …”အား..” နာကျင်လွန်းလို့အော်သံက အခန်းထဲတွင်ပျှံ့လွင့်နေသည်… ပြီးမှ ပင်တီကိုဆွဲချွတ်ပြီး ချွေးဆို့နေတဲ့ စောက်ပတ်ကျဉ်းလေးထဲ လက်နှစ်ချောင်းပူးကာ ကြမ်းကြမ်းလေး ထိုးက လော်လိုက်သည်… ” အားမလုပ်ပါနဲ့ ရှင်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်. . ” နာကျင်လွန်းလို့ စုစု မျက်ရည်ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျတော့ မင်းဒင်ပိုကျေနပ်သွားကာ စုစုရဲ့ရင် ဖုံးအင်္ကျီကြယ်သီးတွေကိုဆွဲဖြုတ်ပြီး ဘော်လီအနက်ရောင်ကို ဆွဲဖြဲကာ တင်းရင်းနေတဲ့ နို့ဖြူဖြူနှစ်လုံးကို အငမ်းမရဆွဲစို့သည်..
စုစု ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး တံတွေးတွေနဲ့ စိုရွှဲသွားသည်… ပြီးမှ မင်းဒင်က ပုဆိုးချွတ်ချလိုက်တော့ ခုနှစ်လက်မလောက်ရှည်တဲ့ လီးက မြင်ရသူစု စုအဖို့ အသက်ရှူရပ်လောက်အောင် ထိတ်လန့်စေသည်.. လုံးပတ်က ရေသန့်ဘူး အသေးဆိုဒ်လောက်ရှိသည်.. မပြောမဆိုနဲ့ စုစုပေါင်ကိုဖြဲပြီး စောက်ပတ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲလီးတေ့ကာစလိုးတော့သည်..လက်ချောင်းနှင့်ထိုးကတည်းက နာပြီးသွေး ထွက်နေတဲ့ စောက်ပတ်က အခု ပိုနာရသည်.. မင်းဒင် မညာ မတာဘဲ နို့ညစ်ပြီး အသားကုန်စောင့်လိုးသည်. . စုစုမှာတော့နာလွန်းလို့ အော်သည် .. အမေမွေးက တည်းက ဒီအရွယ်အထိ ရေချိုးဆပ်ပြာတိုက်ရင်တောင် နာမှာဆိုးလို့ ဖွဖွလေး လုပ်ပြီး ယုယုယယထားခဲ့တဲ့ စောက်ပတ် နုနုလေး.. ခုတော့ မုဒိမ်းကောင် စိတ်ကြိုက် အကြမ်းပတမ်းလိုးတာ ခံနေရသည်..
” ဖွတ် ဖွတ် ဘုတ် ဗြစ် ဗြစ် …” လိုးသံက တစ်ခန်းလုံး ပွက်ပွက်ညံနေသည် … အိမ်ပြင်တံစက်မြိတ်ကရေကျသံထက်မင်းဒင်ရဲ့ လိုးချက်က စည်းချက်ပိုကျသည်… ဆယ့် ငါးမိ နှစ်ခန့် အားရပါးရစောင့်လိုးပြီး.. စုစုစောက်ပတ် ပူနွေးသွားတဲ့အထိ လရည်တွေပန်းထည့်လိုက်သည်.. မင်းဒင် ပုဆိုးပြန်ဝတ်ပြီး စီးကရက် မီးညိကာ.. သွေးထွက်နေတဲ့ ဆရာဝန်လောင်း စောက်ပတ်လေးကိုကြည့်ရင်း ပီတိဖြ စ်ရသည်… စုစုကတော့ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုနေဆဲ.. အိမ်ပြင်မှာမိုးကလည်း အဆက်မပြတ် ရွာနေသေးသည်….
“သမီးသူ့ကို တစ်သက်တစ်ကျွန်းထောင်ချနိုင်ရင်တောင် ကမ္ဘာမကြေနိုင်ဘူး မေမေ..” စုစု ရဲ့ မကျေနပ်နိုင်လောက်တဲ့စကားကို ဒေါ်ခင်နုက လူကြီးပီပီအချိန်ယူပြီးစဉ်းစားသည်…ပြီးမှ..”ကဲသမီး အမေ့ကိုပြော .. မနေ့ညက ကိစ္စကို ဘယ်သူတွေသိသေးလဲ…” ဒေါ်စုရဲ့ မေးခွန်းကို စုစုက ရှက်ရှက်နှင့်.. “မေမေရယ်.. သမီးရယ်.. အဲ့ လူယုတ်မာ မုဒိမ်းကောင်ရယ် .. သုံးယောက်တည်းပါ…”စုစုရဲ့ ဒေါ သသံပါတဲ့ ဖြေပုံကို ဒေါ်နုသေချာနားထောင်ပြီး မျက်ခုံးပင့်ကာ ..” ကဲ ပြောပါဦး .. အဲ့ကောင်က ဘာအလုပ်လုပ်လဲ…” ဒေါ်နုရဲ့ အမေးအမြန်းကို စုစုကစိတ်မရှည်ပေမယ့် ပြန်ဖြေလိုက်သည်…” ဘေးအိမ်က အဒေါ်ကြီးကတော့ အဲ့ကောင်က ညဘက် တက္က စီမောင်းတယ်တော့ ပြောတာပဲ …” ဒေါ်နု ဆယ်မိနစ်လောက် သေချာစဉ်းစားပြီးမှ သက်ပြင်းရှည်ချကာ…”ဟူး….ဒီမှာသမီး… သမီးအတွက် နှစ်နာပြီးတစ်ဖက်သတ်ဆန်နေမှာကိုတော့ မေမေသိတယ်.. အမေ့သမီးကို စော်ကားတဲ့ သူ့ကို အမေကပိုလို့တောင်စိတ်နာသေးတယ်…ဒါပေမယ့် သူ့ကိုလက်ထပ်လိုက်ပါသမီး…” အံသြလောက်တဲ့ ဒေါ်ခင်နုစကားက စုစုနားထဲ သံရည်ပူလောင်းသလိုဖြစ်သွားသည်..
မဖြစ်နိုင်တာ ကိ်ုယ့်ကိုစော်ကားတဲ့ မုဒိမ်းကောင်ကိုလက်ထပ် ဖို့ဆိုတာ… ” အမေ… ဘယ်လိုဖြစ်လို့.. ဒီစကားထွက်တာလဲ ” စုစု မယုံကြည်နိုင်ဘူး…ဒေါ်ခင်နုကဆက်ပြီး..”အင်းသမီး.. မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်..ဒါပေမယ့် သမီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်.. အဲ့ ကောင်ကို တရားစွဲထောင်ချပြီပဲ ထားပါဥိး..သမီးက အပျိုမဟုတ်တော့မှန်း သူများသိတော့ လူတွေကသမီးကို ဘယ်လိုမြင်ကြမလဲ .. သမီးကိုကော လိပ်ပြာ သန့်သန့်နဲ့ လက်ထပ်ယူကြမယ် ထင်လား.. သမီးရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း အမေ့ရဲ့အ သိုင်းအဝိုင်း နောက်ဆုံး မင်းညီမလေးနှစ်ယောက် ကျောင်းမှာ မျက်နှာ ဘယ်လိုပြမလဲ …
ဘဝမှာအမဲစက်အနေနဲ့ ကျန်နေခဲ့မှာ ပီးတော့ မြန်မာမိန်းမသိက္ခာ .. အမေကိုယ်တိုင်ကလည်း သမီးအဖေနဲ့ကလွဲပြီးဘယ်ယောင်္ကျားနဲ့မှ လိင်မဆက်ဆံခဲ့ဘူး… သမီးကိုလည်း အမေ့လိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်… သူများနဲ့ ဆက်ဆံပြီးမှ နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကို လက်ထပ်မယူစေချင်ဘူး.. ဒါ အမေ့ ဆန္ဒပဲ.. အမေလည်း သူ့ကို ရွံပေမယ့် မိသားစုသိက္ခာအတွက် သူ့ကို လက်ထပ်လိုက်ပါသမီး…” ဒေါ်ခင်နု စကားလည်းဆုံးရော စုစု အော်ငိုတော့သည်.. မလွဲသာသည့်အဆုံး မုဒိမ်းကောင်ကို လက်ထပ်ရန် သဘောတူ လိုက်ရသည်….
မင်းဒင် အဖို့တော့ ဘယ်လိုမှမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေ.. ကြည့်လေ.. ညဖက် တက္ကစီခိုးဆွဲတဲ့ မုဒိမ်းကောင်ဘဝကနေ.. ဆရာဝန်မ လင် သူဌေးသားမက် ဘဝသို့ ရောက်နေပြီတကား…လက်ထပ်ပွဲကိုတော့ ပုံမှန်အလှူလေးလုပ်လိုက်သည်…ဒီည.. မင်္ဂလာဦးည….ဟို တစ်ခေါက်က အတင်းရုန်းလို့ အတင်းမုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ရတော့ စုစုရဲ့ အလှအပကိုသေချာမခံစားမိခဲ့.. ခုတော့ ကံတရားရဲမျက်နာသာက ဆရာဝန်မချောချောလေးကို ဇနီးအဖြစ် တရားဝင် လိုးခွင့်ရပြီလေ…စုစုမှာတော့ မင်းဒင်ကိုရွံတဲ့စိတ်က ဖျောက်လို့မရ…အိပ်ခန်းထဲ မင်းဒင်ရောက်တော့.. စုစုက ဂရုမစိုက်ဘဲ စားပွဲပေါ်က ဖိုင်တွဲတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေသည်.. ညလည်း ဆယ်နာရီကျော်ပြီမို့ မင်းဒင်က စိတ် မရှည်ဘဲ စုစုအနောက်ကနေ လှမ်းဖက်ပြီး နို့နှစ်လုံးကို ညဝတ်ဂါဝန်ပေါ်က ဖွဖွလေးကိုင်ကာလည်တိုင်ဖြူဖြူလေးကို နမ်းပြီး..” ချစ်လေး အိပ်တော့မယ်လေကွာ.. ကိုကဂစောင့်နေတာချစ်လေးကို ဟဲဟဲ…”
စုစုကလည်း.. “ဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေတာ နားမလည်ဘူးလား.. ရှင့်ဖာသာအိပ်ချင်အိပ် မနိုးလေကောင်းလေပဲ..” သူစိမ်းဆန်လွန်းတဲ့ စုစု စကားကို မင်းဒင်စိတ်မဆိုးဘဲ.. ချိုင်းအောက်က လက်လျှိုကာ ဘော်လီ မဝတ်ထားတဲ့ ရင်နှစ်မွာကိုညစ်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုချေပေးလိုက်သည်.. စုစုရဲ့ခါးကိုလည်းလီးဖြင့်ထောက်ထားသေးသည်.. စုစုကရုန်းသော်လည်း.. မင်းဒင်ရဲ့ဆရာကျလွန်းသော နို့ကလိမှုကြောင့် ငြိမ်သွားသည်.. ပြီးမှစုစုကိုမျက်နာချင်းဆိုင်ရပ်စေပြီး.. နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းပြီး..ဂါဝန်မကာဖင်နှစ်ခြမ်းကိုပွတ်သည်..စုစုကို စားပွဲပေါ်ထိုင်စေပြီး.. ဂါဝန်ကိုအပေါ်လှန်ကာပေါင်ဖြဲလိုက်တော့အ နာပင်မကျက်သေးတဲ့ စောက်ပတ်လေးက ပြူးထွက်လာသည်.. မင်းဒင်စိတ်မထိန်းဘဲ စောက်စိကို စုပ်ကာ လျှာနဲ့လျှက်တော့သည်.. “ရွှတ် အား အင်း ရှင်ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ.. ညစ်ပတ်တယ်…” စုစု မနေ နိုင်တော့ဘဲ မင်းဒင် ခေါင်းကို ကိုင်ကာ ပေါင်ကြားထဲ အတင်းထိုးကပ်သည်.. စောက်ရည်ကြည်များထွက်လာတော့ မင်းဒင်မြိုချပြီးဖင်ညစ်ကာ စောက်ပတ်ခေါင်းထဲထိလျှာနဲ့ထိုး ကလိသည်…
“ပလပ် ရှီး အား…..” ခန နေတော့ စောက်ခေါင်းထဲမှအရည်များထွက်လာပြီး စုစု တစ်ချီပြီးသွားသည်… “ဘယ်လိုလဲ ကောင်းလား သဲလေး…” မျက်နာမှာ စောက်ရည်ပေပွနေတဲ့ မင်းဒင်အမေးကြောင့်စုစုနေရခက်သွားသည်.. တစ်ခါမှမခံစားဖူးတာမို့ အရသာထူးကဲနေသည်.. ခေါင်းလေးသာငြိမ်းလိုက်သည်…မင်းဒင်က ပြုံးပြီစုစုကိုကုတင်ပေါ်ပွေ့ကာ..တစ်ကိုယ်လုံးချွတ်လိုက်တောအားပါး . .နတ်မိမယ်လေးလိုပင်.. လိုးဖူးသမျှ မိန်းမတွေထဲ ဒီမိန်းမအလှဆုံးပင်..ကိုယ်လုံးတီးအလှနဲ့စုစုကိုကြည်ပြီး မင်းဒင်စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ လီးထိတ် တံတွေးစွတ်ပြီး စောက်ပတ်ဝတေ့ကာဖြည်းဖြည်းချင်းလိုးသည်..”ဗြိ ဗြစ် အင့် အား…”တစ်ခါကြမ်းကြမ်းခံဖူးတော့ ဒီတစ်ခါ စုစုသိပ်မနာဘဲ မင်းဒင် လိုးချက်တိုင်းကို ကော့ကော့ပေးသည်… ပြီးမှ စုစုကိုဖင်ကုန်းခိုင်းကာ အနောက်က စောင့်လိုးသည်… လက်ညိုးကလည်း စအိုဝကိုထိုးကလိသည်..ခါးကိုင်လိုးလိုက် ဆံပင်စောင့်ဆွဲပြီးလိုးလိုက်လုပ်သည်….”အား ကောင်းလိုက်တာ သဲလေးရာ စောက်ပတ်က စီးနေတာပဲ…ဘွတ်ဘွတ်” စောက့်လိုးချက်နဲ့အတူ နို့နှစ်လုံးကပြုတ်ထွက်မတတ်ခါရမ်းနေသည်…မင်းဒင်လည်းအားရ ပါးရ ဆက်တိုက်စောင့်လိုးပြီး သုတ်ရည်များပန်းထည့်ကာ ပြီးသွားတော့သည်..
ထိုမင်္ဂလာဦးညမှစပြီး စုစုလည်း မင်းဒင်ကိုအမြင်ကြည်သွားသည်.. တစ်ရက်အနည်းဆုံး နှစ်ခါလောက်တော့ အလိုးခံပေးသည်.. စောက်ပတ်ကော ပါးစပ်ကော ဖင်ကော နေ့တိုင်းအလိုးခံရသည်…မင်းဒင်က ကားမောင်းရုံက လွဲပြီးဘာမှ မလုပ်တတ်သောကြောင့် အိမ်ကားမောင်းရသည်.. ဒေါ်ခင်နု ကတော့ မင်းဒင် ကို ဒရိုက်ဘာ တစ်ယောက်လိုသာ ဆက်ဆံသော်လည်း အလတ်မနှင့် အငယ်မကမူ မင်းဒင်ကို ချစ်ကြသည် ။ အစ်ကို တစ်ယောက်လို အားကိုးသည် .. အိမ်မှာ ယောင်္ကျားသား မရှိခဲ့လို့ လည်းဖြစ်မည်.. ဒီနှစ်ယောက်တည်းမှာမှ အငယ်မ သူသူ ကပိုကဲသည် .. မင်းဒင်နှင့် ဖင်ပုတ်ခေါင်းပုတ်နေသည် .. တစ်ခါတလေ ဧည့်ခန်းထဲ tv ကြည့်ရက်း မင်းဒင်ပေါင်ပေါ်မှာ ကလေး လိုပင် အိပ်ပျော်တတ်သည်.. စုစုက တော့ ညီမလေးနှစ်ယောက် မိမိအမျိုးသားကို အားကိုးသောကြောင့် ပီတိဖြာရသည်.. ဒေါ်ခင်နုကတော့ ဂရုကိုမစိုက် ခပ်တန်းတန်းပင်နေသည် … မင်းဒင်မူကား.. စားနေကျကြောင် ပါးပီပီ .. တစ်အိမ်လုံးကို သိမ်းချင်သည်.. သိမ်းချင်တယ်ဆိုတာ ပစ္စည်းဥ စ္စာမဟုတ်.. သိမ်းကျုံးလိုး ချင်တာကိုပြောတာ.. ဒါကြောင့်လည်း အခွင့်ရေးတွေဖန်နေခြင်းဖြစ်သည်…
တစ်နေ့… မင်းဒင်နှင့် သူသူတို့နှစ်ယောက်တည်း ဧည့်ခန်းမှာ tv ကြည့်သည်..ထုံးစံ အတိုင်း သူသူက မင်းဒင်ပေါင် ပ်ါအိပ်ကြည့်ရင်း မှေးကနဲ အိပ်ပျော် သွားသည် …သူသူ ကခုမှ ကိုးတန်းဆိုပေမယ့် မင်းသမီးငယ်လေး ယွန်ယွန်းနှင့်ပုံစံတူ.. နုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေး နို့မကြီးဖင်မကြီးဆိုပေမယ့် အပျိုတော့ဖြစ်နေပြီ.. မင်းဒင်အဖို့တော့ မိန်းမမှန်လျှင် ရာသီလာကတည်းက စလိုးမယ့် အရွယ်ဟု ခံယူထားခြင်းပင်.. ခုလည်းကြည့် အငယ်မမိသူ့ ပေါင်ပ်ါအိပ်နေပုံ..အပြစ်ကင်းစင်လွန်းလှသည်.. မင်းဒင်ကသူသူ ညဝတ်အင်္ကျီအာက်လက်လျှိုကာ ဗိုက်သားမှ တဆင့် ဘရာမ ဝတ်ထားတဲ့ နို့သေးသေးလေးနှစ်လုံးကို ပွတ်သည်.. သူသူ အ နည်းငယ် လှုပ်ရှားလာတော့ မင်းဒင်လှန့်သွားသေးသော်လည်း ပြန်ငြိမ်သွားမှ မင်းဒင် စိတ်သက်သာပြီး ပြုံးလိုက်သည်.. ပြီးမှ ညဝတ်ဘောင်းဘီပါးအောက်ကနေ စောက်ပတ်ကို စမ်းကြည့်တော့ အရည်ချွဲများဆိုနေသည်..ဒီကောင်မလေး အိပ်ချင်ဟန်ဆောင်နေမှန်း မင်းဒင်ရိပ်မိသွားသည်…ထို့ကြောင့် သူသူ့လက်တစ်ဖက်ကိုယူကာပုဆိုးအောက်ထည့်ပြီးလီးကိုင်ခိုင်းတော့ သူသူလည်း ဖွဖွလေး ကိုင်ထားသည်.. ဇာတ်လမ်းကတော့ အဆင်ပြေနေပြီ..
“ကိုမင်း.. မအိပ်သေးဘူးလား မိုးချုပ်နေပြီ…” ရုတ်တရက် အခန်းထဲမှစုစု ခေါ်သံကြောင့် မင်းဒင်ကော သူသူကောဂလှန့်ပြီးငြိမ်သွားသည်.. မင်းဒင်အိပ်ခန်းထဲ ဝင်သည်အထိသူသူကတော့ ဆိုဖာပေါ်မှာ အိပ်ဟန်ဆောင်နေဆဲ…. ဒီနေ့ အလတ်မကို ကျောင်းအရင်ပို့ရမည် .. ပြီးယောက္ခမ.. ပြီးမိန်းမစုစုကိုဆေးရုံရှေ့ချပေးလိုက်သည် … သူသူကိုကျောင်းပို့ဖို့ပဲကျန်သည်.. ကျောင်းက ၉ နာရီမှတက်မှာ ခုမှ ၈ နာရီကျော်ကျော်. . ဆေးရုံနှင့်ကျောင်းက သိပ်မဝေးတာမို့ဂဆယ်မိနစ်လောက် သာမောင်းရမည်….” ဟဲ့ မိသု အရှေ့ခန်းလာထိုင်စမ်း လာ…” မင်းဒင်ကခေါ်တော့ သူသူလည်း အရှေ့ခန်းဝင်ထိုင်သည် … ဆံပင်ကို ငါးရိုးပုံစည်းထားပြီး သနပ်ခါးပါးကွက်ကြား ရင်ဖုံးကျောင်းဖြူလေးနဲ့ ခယ်မငယ်လေး သူသူ လှပြီးချစ်စရာကောင်းလွန်းလှသည်..ကျောင်းစိမ်းချိတ်ထဘီစကပ်နှင့် ကားပေါ်တက်တော့ ပေါင်သားဖွေးဖွေးလေးကို တွေ့ရသည်..
မင်းဒင်ငပဲကို မနည်းထိန်းပြီး ဆေးရုံမှ စမောင်းထွက်တော့သည်.. ကျောင်းမရောက်ခင် လမ်းတစ်ဝက်လောက် မီးပွိုင့်မိသည်.. ရုံးတက်ကျောင်းတက်ချိန်မို့ တော်တော်ကြာမည်ကို သိသည်.. ထိုစဉ် မင်းဒင်လက်က သူသူပေါင်ပေါ် ကနေစပံတ်တော့သည် .. သူသူလည်းဘာမှ မတုံ့ပြန်ဘဲငြိမ်ခံနေသည်.. စိတ်ကစားတတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တော့ မင်းဒင်က အထာနပ်သည် .. လက်ကအရဲစွန့်ကာ ထဘီကြားထဲဝင်ပြီး ပေါင်သားလေးကိုပွတ်နေတုန်း မီးပွိုင့်စိမ်းသွားသည် … ကျောင်းရှေ့ရောက်တော့..”ပေးစမ်း မင်းလွယ်အိတ်..”ဟုပြောကာ သူသူလွယ် အိတ်ထဲမှ ခွင့်စာကဒ်ယူဖြည့်ပြီး ” ဘယ် မသွားနဲ့ ..ကားပေါ်ကစောင့်နေ..” ဟုဆိုကာ ကားတံခါးပိတ်ပြီး ကျောင်းထဲဝင် ခွင့်စာသွားပေးပြီး ပြန်ရောက်လာကာ “မင်း ဒီနေ့ ကျောင်းမတက်နဲ့.. ခွင့်တိုင်ပြီးပြီ..” ဟုပြောပြီး ကားမောင်းကာ အိမ်ပြန်သည်..
သူသူက ဘာတစ်ခွန်းမှမပြော စိတ်ကစားတဲ့ အရွယ်ဖြစ်သလို မင်းဒင်နဲ့ စုစု လိုးတာကိုလည်း မြင်ဖူးသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ မင်းဒင်အပေါ်စိတ်ယိုင်မိခြင်းပင် … “ကျွိ….” အိမ်ရှေ့ကားထိုးရပ်ပြီး… ဧည့်ခန်းထဲဝင်ထိုင်ကာ… မင်းဒင်က.. “လာမိသု.. ငါ့ပေါ်ထိုင်” ပြောပြီ.. သူသူကိုဆွဲကာ ပေါင်ပေါ်ထိုင်ခိုင်းသည်.. ပြီးမှ သနပ်ခါးတင်ထားတဲ့ ပါးပြင်ကိုအနမ်းပေးပြီး နုတ်ခမ်းကိုလျှာနဲ့ အတင်းထိုးထည့်ကာစုပ်နမ်းတော့သည်..လက်ကလည်း ကျောင်ဖြူအင်္ကျီပေါ်က နေ နို့လေးကိုင်လိုက် ဖင်လေးပွတ် လိုက်လုပ်သည်. . သူသူ ကတော့ မင်းဒင်ပြုသမျှ ငြိမ်ခံနေသည်.. မင်းဒင်က ဆက်ပြီး သူသူ့ရင်ဖုံးအင်္ကျီကို ချွတ်ပြီး ဘရာဇီယာကိုပါ ချိတ်ဖြုတ်လိုက်တော့ ရေနွေးခွက်အရွယ် နို့လေးနှစ်လုံးက ထွက်လာသည်.. နို့သီးခေါင်းလေးတောင် သေးနေသေးသည်.. မင်းဒင်က နို့သီးခေါင်းလေးကို ဆွဲချေလိုက် စို့လိုက်လုပ်တော့ သူသူ ခါးကော့သွားသည်..
“အင်း အား ကို့ကြီး ရယ် ဟင့်…” ကျောင်းစိမ်းထဘီ ချိတ်ကိုပါဖြုတ်ချွတ်ပြီး ပင်တီအပန်းရောင်လေးကိုပါချွတ်လိုက်တော့ သူသူတစ်ကိုယ်လုံး အဝတ်ဗလာဖြစ်သွားသည်..ငယ်သော်လည်း ထွားတဲ့ အလှကိုကြည့်ရင်း မင်းဒင် တံတွေးမြိုချသည်.. စောက် ပတ် ဆိုလျှင် အမွေးနုရေးရေး လေးသာ ပေါက်သေးသည်.. ပေါင်ဖြဲပြီး စောက်ပတ်ကို ဆယ်မိနှစ်ခန့် လျှက်ပေးလိုက်သည် … ” အား ကိုးကြီးရယ်.. ဟင့်….” ကောင်းလွန်းတော့ သူသူ စညည်းတော့သည်… ပြီးမှ ပုဆိုးချွတ်ကာလီးကိုသူသူမျက်နာနားတေ့ပေးလိုက်သည်.. အစ်မစုစုလုပ်နေကျကို တွေ့ဖူးတော့ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းသူသူသိသည် .. မင်းဒင်ရဲ့ မာတောက်နေတဲ့ လီးဒစ်ပြဲကြီးကိုကိုင်ကာ နုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနဲ့ စစုပ်တော့သည်.. လီးကကြီး လွန်းတော့ သူသူ့ပါးစပ်ကအပြည့်ဖြစ်နေသည်…”စုပ်စမ်းကွာ ကောင်မ.. စုပ် .. လျှာနဲ့လျှက်ပြီးစုပ်…အား .. စုပ်စမ်းကွာ…” မင်းဒင်ပြောရင်း သူသူ ခေါ်င်းကိုင်ကာ ပါးစပ်ကို လိုးတော့သည်…
” ပလွတ် ပလွတ်.. အား…စုပ်စမ်း ဖာသည်မလေး.. မင်းအစ်မထက် မင်းက ပိုမိုက်တာ.. မင်းအစ်မကိုလိုးတာထက် ပိုကောင်းအောင်လိုးပေးမယ် စုပ်စမ်း စောက်ဖာသည်မ.. အား ကောင်း လိုက်တာ .. ” ခက်ထန်သော စကားလုံးတွေနဲ့အတူ သူသူပါးစပ်ကို အဆက်မပြတ်လိုးတော့သည်.. သူသူ့မေးစေ့ကို ဂွေးစေ့နှစ်လုံးက ဆက်တိုက်ရိုက်နေသည်.. လီးက အာခေါင်ထဲထိ စောင့်နေပြီး.. ခဏကြာတော့ ပါးစပ်ထဲ ညှီစို့စို့ အရည်များဝင်လာသည်.. တစ်အောင့်လောက်နေမှ မင်းဒင်က သူသူ့ပါးစပ်ထဲမှ လီးဆွဲထုတ်ကာ…”ပလွတ်… မထွေးထုတ်နဲ့ မျြိုချစမ်းစောက်ကာင်မ…”သူသူလည်း နုတ်ခမ်းမှာပါပေးနေတဲ့ လရည်တွေကို ပါလျှာနဲ့သပ်ပြီးမြိုချလိုက်သည်.. အပြုံးတော့မပျက်သေး…”အလိုးခံချင်နေတာမလား…” ပက်လက်လှန်ပြီး ပေါင်ကားထား..” သူသူလည်း လက်နှစ်ဖက်နှင့် ပေါင်ဖြဲလိုက်တော့ စောက်ပတ်သေးသေးလေး ကပြဲထွက်လာသည်..
မင်းဒင်လည်းတံတွေးစွတ်ပြီးဖိလိုးတော့သည် “ဗြစ် ဗြစ် ဒုတ်..အ …” အပျိုမှေးပေါက်သွားပြီး သွေးထွက်လာပေမယ့် သူသူတစ်ချက်တည်းမှဲ့ပြီး ကြိတ်ခံနေသည်… တော်တော်ထန်တဲ့ကလေးမပဲဟုတွေးပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဆက်တိုက်စောင့်လိုးတော့သည်…”ဖွန် ဖွတ် အ အင့်အား….” စောက်ပတ်ကကျဉ်းလွန်းတော့ မင်းဒင်အဖို့ အရသာတွေ့လွန်းလှသည်… သူသူ လည်းမနေနိုင်ဘဲ…” အား .. ကိုကြီး ကောင်းတယ်.. ဘယ်လိုလဲမသိဘူး.. လုပ်ဥိး… ဒီထက်ပိုကြမ်းဦးကွာ… ပြဲသွားပါစေ… .” ဒီလောက်ဖြစ်နေတာ “ကဲကွာ… ငါ လိုးမလေး … ဖွတ် ဖွတ် ဗြစ် ဗြစ်….” အချက်ငါးဆယ်လောက် လိုးလိုက်တော့မှ သူသူပြီး လို့ငြိမ်သွားသည်… မင်းဒင်ကတော့ မပြီးသေး… ” ဖင်ကုန်းပေးစမ်း … ” သူသူလည်း ဖင်ကုန်းပေးတော့ မင်းဒင်က လက်ကိုတံတွေးစွတ်ပြီး အပန်းရောင်စအိုဝကိုစချဲ့သည် .. စစချင်းတော့ သူသူ နည်းနည်းရုန်းသည်.. နောက်မှ ငြိမ်ခံကာ..
မင်းဒင်လည်းလက်အဆုံးထိထိုးထည့်ကာမွေတော့သည်…ပြီးမှ မ ပြောမဆိုနဲ့ ဖင်ဖြဲကာလီးတေ့ပြီးဖိသွင်းတော့ ဖင်ပြဲသွားကာ သွေးထွက်လာသည်..” ဗြိ..အားနာတယ်””ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်း ဖြန်းဖြန်း … ” မင်းဒင်ကမညာဘဲ ဖင်ကို ရိုက်ကာ ဆက်ဖိလိုးတော့သည်… “ဗြိ ဗြိ အာ အ….” နာလွန်းလို့ သူသူ မျက်ရည်ပင်ကျသည် … မင်းဒင်ကတော့ ကိုးတန်းကျောင်းသူ အငုံးလေးကို ပါကင်ကော ခရေပါခြွေခွင့်ရတော့ ဖီးတက်လွန်းနေပြီ…”မှတ်ပြီလား .. ဖြန်း ဖြန်း ဘွတ် ဘွတ်..” တင်ပါးရိုက်ပြီး အချက်လငါးဆယ်လောက် ဆက်တိုက် စောင့်လိုးကာစအိုထဲ လရည်ပူတွေ ပန်းထည့်လိုက်သည်..ဤသို့ဖြင့် မင်းဒင်အဖို့တော့ခယ်မငယ်လေးသူသူကို အိမ်ကလူလစ်တိုင်းလိုးတော့သည်.. ကျောင်းမသွားခင် ကျောင်းဆင်းအပြီး အမြဲလိုးကြလေလတော့သည်.. ပြီးပါပြီ crd